Soo dejisan Ammyy Admin 3.6 – Vessoft
WindowsShabakadGelitaanka fogAmmyy Admin
Qeybta: Gelitaanka fog
Bogga rasmiga ah: Ammyy Admin
Admin Ammyy – software ah in meel fog laga xakameeyo computer ama server internetka ee. software The waa inay awoodaan inay meel fog laga xakameeyo desktop-ka, bilowdo software ah, wareejiyo faylasha, isgaadhsiin ee chat cod, guuleysatey computer ah, iwm Ammyy Admin waa wanaagsan maamulka fog oo ka mid ah shabakadaha shirkadaha, ururka shaqaalaha shaqada fog iyo haysta oo ka mid ah bandhigyo online. Ammyy Admin bixisaa heer la isku halleyn karo ammaanka iyo xogta lo marayo algorithms ka gaar ah oo ay isticmaalaan furaha kala duwan kulan kasta. Ammyy Admin shaqeeya iyada oo loo marayo NAT iyo uma baahna IP-cinwaanada ama qaabeynta of gudbiyo dekedda.
gacanta Remote ah files desktop iyo nidaamka
Maamulka Remote ah shabakadaha shirkadaha
gacanta Remote ah server oo aan joogitaanka qofka dhinaca kale
Exchange of files iyo fayl u dhexeeya kombiyuutarada
ilaalinta lagu kalsoon yahay iyo sirta xogta
Soo dejisan Ammyy Admin
Barnaamijkani wuxuu waxyeello u geysan karaa kombuyutarkaaga, faahfaahin.
Faallo ku saabsan Ammyy Admin
Ammyy Admin Xirfadaha la xiriira
AnyDesk – softiweer marin meel fog ah oo loogu talagalay isticmaalka kombiyuutarka iyo caawinta fog iyadoo aan dib u dhac dhicin.
software ah ee ay gacanta ku fog of computer adigoo isticmaalaya Android, macruufka iyo Windows Phone qalabka. software The buuxda waa simulates hawlaha mouse iyo keyboard.
GoToMyPC – barnaamij softiran si loo helo xogta kombuyuutarka fog ama aaladda. Softiweerku wuxuu adeegsadaa talaabooyin amni iyo talaabooyin adag si loo ilaaliyo macluumaadka.
software A si loo hagaajiyo isku xirnaanta internet-ka iyada oo la samaynaayo isbedelka loo baahan yahay in ay saldhigyo ka modem iyo modules kale network.
software ee maamulka fog computer by isticmaalaya kordhin gaar ah in ay tayadoodii bandwidth ee khadaka warisgaarsiinta ee gaabis ah.
Root Genius – softiweer ayaa gacan ka geysanaya helitaanka xuquuqaha asalka u ah moodooyinka kala duwan ee taleefannada casriga ah ee Android iyo kiniiniyada leh hal keystroke ah.